La xiiray, kahor ama kadib? | Ragga Stylish
Fasal yeesho | | La xiiray, Is-qurxinta, Daryeelka shaqsiyeed
Xitaa maanta, qarniga XNUMXaad, waxaa jira kuwa aan hubin goorta ugu habboon in la xiiro, ka hor o ka dib ka qubeyska. Difaacayaasha qaab kasta waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda oo ay u diyaargaroobeen inay ka difaacaan weerarada kooxda ay xafiiltamaan. Qaarkood waxay dhahaan haddii aad sameyso kahor intaadan siin waqti dheeri ah si nabaradu u bogsadaan oo maqaarka biyaha loogu soo nooleeyo Kuwa kale in qaabkan maqaarka loo diyaariyo, in timuhu jilcaan yihiin ... Laakiin, Runtii waa maxay waqtiga saxda ah?
Waa hagaag sida wax walba, ma jiro mid kaamil ah. In kasta oo ay run tahay in la sameeyo ka dib qubaysku wuxuu diyaariyaa maqaarka, hawshan sidoo kale waa la samayn karaa "qalalan". Furaha ayaa ah diyaarso maqaarka iyo timaha ka hor xiirashada. Haddii aan sameyno ka hor qubeyska, waa inaan isticmaalnaa kareemada, saliidaha ama alaabada diyaarinaya maqaarka. Haddii, dhinaca kale, aan qabanno ka dib, qubeyska laftiisa ayaa horeyba u jilciya timaha ku filan oo biyaha kulul ayaa furaya daloolada.
Waxaan cadeynayaa, qubeyska kadib. Tan iyada oo lagu daro isticmaalka jel-ka-baxa, waxaan u helayaa maqaarka xaaladaha ugu habboon ee xiirashada. Adigana, Waa maxay waqtiga aad ugu jeceshahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » La xiiray, kahor ama kadib?
buluug iyo oranji dijo
Marwalba waan xiiraa qubeyska kadib, mararka qaar horey baan usameeyay, faraqa ayaa aad u muuqda marka aad sameyso kadib, gaar ahaan hadii ay tahay jiilaal oo aad qubaysato, timaha ayaa noqda kuwa jilicsan oo xiirashada ayaa aad ufudud.
By habka, Waxaan dhawaan go'aansaday in aan beddelo jel timaha. Kahor intaanan had iyo jeer isticmaalin kareem, iyo tan iyo markii aan isticmaalo Gillette gel waan ku faraxsanahay, laakiin waxaan go'aansaday inaan beddelo maalin kale oo aan la joogo Nivea's, waana wax laga xumaado! Ka dib markaan xiirto waxaan leeyahay casaan aanan horay u laheyn jelka kale, maxaan u badalay?
Ku jawaab azulynaranja
Waxaan had iyo jeer qubeyska kadib !! oo had iyo jeer leh gel !!
Jawaab Jose Martín
Hagaag, runta, Héctor, waa inaad igula talisaa arimahan, maxaa yeelay inkasta oo aan marwalba raadsado macluumaad laxiriira xulashada alaabada, shaki ayaan ka qabaa hawada.
Hadda waxaan u isticmaalaa xoqitaan horay loo xiiray, iyo qoyaan-qoyan wixii ka dambeeya intaas ka sokow waxyaabahaas, waxaan u isticmaalaa 'L'oreal Hydra Energetic for the contour eye, and Neutrogena hand cream. Xitaa iyadoo sidaas ah, waxaan u xiisay jir wanaagsan iyo qoyaanka wajiga.Sidaa darteed waxaan isku dhiibaa gacmahaaga wixii hada ka dambeeya, tie jaalle !!!
Hagaag, waxaan u maleynayaa in maqaarka loogu diyaarinayo xiirashada wanaagsan ay muhiim tahay, yaa ku sameeya si qumman oo qubays kulul ku qadariya markay timaado adeegsiga garbaha fiiqan ee xiirashodooda, in kastoo ay jiraan habab kale oo wax ku ool ah. Waxaan kuu sheegayaa khiyaamada ugu fiican:
- Isticmaal jel ama xumbo kahor intaadan xiirin, u ogolow inay wax qabato dhowr daqiiqo.
- Kadibna waan xiiranaa.
- Ugu dambayntiina waa qubeys wanaagsan, oo leh wejiga wejiga oo si fiican noogu waraabinaya, tani waxay xireysaa nabarradii suurtagalka ahaa ee aan furey, sidoo kale maqaarkana aad ayaan uga qoyaan badan nahay, haddii ay u muuqato inaysan ku filnaynna, isku day inaad naftaada ugu dambeeya «Dib u eegis» biyo qabow, tani waxay xirtaa daloolada, waxayna sidoo kale timahaaga siin doontaa dhalaal aad u dabiici ah.
Ugu dambeyntiina, kuwa idinka mid ah ee ka hadlaya adeegsiga walxaha qarxa, waxaan rajeynayaa inaadan sameyn maalin kasta, usbuuciiba hal mar ayaa ka badan intii ku filan, maadaama ay aad ugu xun tahay maqaarka.
Hagaag, waan sameeyaa markay dhacdo, runtu waxay tahay, guud ahaan 2 ama 3 usbuuc kasta ... faa iidooyinka haysashada gadhka la mid ah kii aan ku lahaa 14 xD
Iyadoo la tixraacayo diyaarinta maqaarka. Waxaa jira xoogaa qoyaan-qoyaan ah oo jilciya timaha (Waxaan isticmaalay mid ka mid ah Nivea waqti ka hor runtiina waxay tahay inay wax muuqdaan). Haddii aad xiirto subaxa ka dib waxaad xirataa habeenkii ama caksigeeda.
Kadib xumbo ama jel? Hagaag, illaa iyo inta ay tayada tahay wax macno ah ma leh (Waan ku raacsanahay buluug iyo oranji, Nivea waxay aad uga tagtaa waxyaabo badan oo la doonayo marka la eego jel iyo xumbo). Waxaan isticmaali jiray mid ka mid ah kuwa lagu iibiyo farmasiyada waana mid cajiib ah. Hadda, ma garanayo sababta midkoodna, waxaan u beddelay Gillette gel.
Carlos, waxaan kugula talinayaa inaad u isticmaasho qolka qubeyska ee 'Dove gel' (kan aan ugu jeclahay) ama Palmolive NB sida qoyaanka jirka, waa waxa keena natiijooyinka ugu fiican. Qoyaanka wajiga, qiime ahaan lacagta kan ugu habboon sifooyinkaaga L'Oreal.
PS: Javier, adigu had iyo jeer waxaad iska leedahay XDDDD
Longines GrandeVitesse, oo meesha ka saareysa khuraafaad.
I-gucci, raaxada dhijitaalka ah